July 24, 2020 – Warmae.com
ကြက် – တစ်ကောင်
ကြက်သွန်နီ – ငါးဥ
ကြက်သွန်ဖြူ – နှစ်ဥ
အုန်းသီး – တစ်ခြမ်း
နနွင်း၊ ဆား – အနေတော်
ဆီ – ၁၀ ကျပ်သား
ချင်း – သင့်ရုံ
ငရုတ်ပွ – ငါးတောင့်
ငရုတ်သီးစိမ်း – ငါးတောင့်
မဆလာ – ငါးကျပ်သား
ကြက်သားကိုတုံးပြီး ရေဆေး၍ ဆားနှယ်ထားပါ။ အုန်းသီးခြမ်းနှင့်မဆလာတို့ကို ညှက်အောင်ကြိတ်ပါ။ ကြက်သွန်ဖြူ၊ နီ၊ ငရုတ်ပွ၊ ချင်းတို့ကို ညှက်အောင်ကြိတ်ပါ။ ငရုတ်သီးစိမ်းကို ရေဆေး၍ ထက်ခြမ်းခွဲပါ။ ငရုတ်၊ ကြက်သွန်၊ မဆလာ၊ အုန်းသီးတို့ကို ဆီသတ်ပါ။ ကြက်သားဖတ်များထည့်ပြီးလုံးပါ။ ရေအနည်းငယ်ထည့်၍ဆီပြန်ချက်ပါ။
Raw chicken thighs with rosemary, red onion and peppercorns on cutting board. Uncooked poultry meat. Culinary cooking ingredients
ကြက်အရေခွံသုပ် – ၂၅ ကျပ်သား
ဆီ – အနေတော်
ကြက်သွန်နီ – နှစ်ဥ
ဂေါ်ဖီ – တစ်စိတ်
ငရုတ်သီးစိမ်း – အနေတော်
ငရုတ်သီးအကျက်မှုန့် – အနည်းငယ်
ဟင်းခတ်မှုန့်၊ ငံပြာရည် – အနည်းငယ်
ရှောက်ရွက် – အနေတော်တစ်စည်း
ကြက်အရေခွံများကို ဆား၊ နနွင်းသင့်ရုံထည့်၍ ပြုတ်ပါ။ ဂေါ်ဖီ၊ငရုတ်သီးစိမ်း၊ ရှောက်ရွက်၊ ကြက်သွန်နီတစ်ဥကိုပါးပါးလှီးထားပါ။ ကျန်တစ်ဝက်ကို ဆီချက် ချက်ထားပါ။ ပြုတ်ထားသော အရေခွံများကို အနေတော်အရွယ်ပိုင်း၍ပါးပါးလှီးထားသော ကြက်သွန်နီ၊ ဂေါ်ဖီ၊ ရှောက်ရွက်၊ ငရုတ်သီးစိမ်း၊ ဆီချက်တို့ဖြင့် ရောနှယ်ပါ။ ဆား၊ ဟင်းခတ်မှုန့်ကို
ချိန်ထည့်၍ အပေါ့အငံကို အနေတော်ထည့်သုံးဆောင်နိုင်ပါသည်။
ကြက်သား – သုံးဆယ်ကျပ်သား
အာလူး – တစ်ဆယ့်ငါးကျပ်သား
ကြက်သွန်ဖြူ – သုံးဥ
ကြက်သွန်နီ – တစ်ဆယ်ကျပ်သား
ဆား၊ နနွင်း၊ ငံပြာရည် – အနည်းငယ်
ကရဝေးရွက်၊ သစ်ကြမ်းပိုးခေါက် – အနည်းငယ်
မဆလာ – အထုပ်သေးတစ်ထုပ်
ကြက်သားကို ရေဆေး၍ အတုံးအလတ်များတုံးထားပါ။ ချင်း၊ ကြက်သွန်ဖြူ၊ ကြက်သွန်နီတို့ကို ထောင်း၍တစ်ဝက်ကို ကြက်သားတုံးများဖြင့် နှယ်ထားပါ။ ဆား၊ ငံပြာရည်အနည်းငယ်ထည့်နှယ်ပါ။ ကြက်သားတုံးများနှယ်၍ကျန်သော ချင်း၊ ကြက်သွန်ထောင်းပြီးသားကို ဆီသတ်ပါ။ ဆီသတ်ထားသည့်အိုးထဲသို့ သစ်ကြမ်းပိုးခေါက်၊ ကရဝေးရွက်ထည့်ပါ။ ဆီသတ်ပြီးနောက် ကြက်သားတုံးများထည့်ပါ။ ကြက်သားနူးစေရန်အတွက် ရေအနည်းငယ်ထည့်၍ အဖုံးအုပ်ထားပါ။ ကြက်သားနူးပြီဆိုပါက အာလူးအခြမ်းများကိုထည့်၍ နူးသည်အထိ ဆက်တည်ပါ။